ဘော်စတွန် မာရသွန်ပြေးပွဲမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » U.S. News » ဘော်စတွန် မာရသွန်ပြေးပွဲမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲ
ဘော်စတွန် မာရသွန်ပြေးပွဲမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲ
Posted by ရြာစားေက်ာ္ မင္းနႏၶာ on Apr 16, 2013 in U.S. News | 12 comments
တီဗွီမှာ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တွေပြနေတာ ကြည့်နေတုန်း ဗုံးကွဲတဲ့ သတင်းလာနေတယ် အသိတစ်ယောက်ပြောလို့ ကျနော်တို့ဆီမှာ ဖြစ်ပြန်ပြီလားလို့ အရမ်းစိတ်ပူသွားတာ… နောက်မှ ဘော်စတွန်မှာတဲ့.. ဒါနဲ့ အပြေးအလွှား အွန်လိုင်းမှာရှာကြည့်ရတယ်
UPDATE[6:00PM EST]: 12 confirmed dead. 50 confirmed injured. 10 require amputation. The suspect is identified asaSaudi man who’s injured and under heavy guard in the hospital. For images and animations of the explosion, with more news, visit: http://www.nypost.com/p/news/national…
၁၅-၄-၂၀၁၃ ရက်နေ့ .. အမေရိကန်နိုင်ငံ ဘော်စတွန်မြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ မာရသွန်ပြေးပွဲမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့
မာရသွန် ပန်းတိုင်နေရာအနီးမှာ စက္ကန့်ပိုင်းသာခြားပြီး ဗုံးနှစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ..
နောက်ဆုံးသတင်းအရ ၁၂ ဦးသေ ၅ဝ ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်
သံသယရှိသူဟာလည်း ပေါက်ကွဲမှုမှာ ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး ဆေးရုံမှာ အစောင့်အကြပ်ထူထပ်စွာနဲ့ ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်
credit to: abc News, www.nypost.com
ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ says:
မာရသွန်ကနေ ၁ မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ John F. Kennedy Presidential Library and Museum မှာ တတိယ ဗုံးတစ်လုံး ထပ်ကွဲသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
Authorities ID person of interest as Saudi national in marathon bombings, under guard at Boston hospital..
(credit to: nypost.com)
ကြည့်ရှု့ ကူးယူထားလိုက်တယ်ဗျို့ သနားစရာဗျာ……..
အလကား အေးအေးဆေးဆေး ပြိုင်ပွဲလုပ်နေတဲ့လူတွေကို ဗုံးထောင်ရတယ်လို့…..
After Boston bombings,asearch for answers
USA TODAY	– ‎14 minutes ago‎
BOSTON – Two explosions ripped through the Boston Marathon’s crowded finish line Monday afternoon, killing at least three people and injuring more than 141.
ကပ္ပိယ မောင်ကြီး says:
ကျုပ်လဲ ၁ဝနာရီလောက် သတင်းဝင်ဖတ်ကြည့်တော့ ၊ အစွန်းရောက်ကုလားတွေရဲ ့လက်ချက် ဆိုပဲ
အဲ့သတင်းကို ကြားပြီးပြီးချင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရလို ့
ဒီလင့်ခ်လေးမှာ လိုက်ခ်လုပ်ပြီး ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်
Sorry for the victims.
ရွာက အမေဆီက ဖုန်းဆက်တော့
ဗုံးပေါက်လို့ဆို … တဲ့ …
ကျုပ်ကတောင် ပြန်နောက်လိုက်သေးတယ် ..
ဟုတ်တယ် .. ပေါက်သွားတယ် .. ရေပုံး လို့ … အဟဲ …
ကျုပ်တို့ဆီမှာ သင်္ကြန်နဲ့ ဗုံး နဲ့ကလည်း အဆက်အစပ် ရှိတာကလား …
ခုလို အလန့်ထညက် ဆိုဒေါ့ လန့်တွားဒါပေါ့ .. ကလူ ကလူ ..
ရောင်စုံ ဒုက္ခတွေနဲ့ပါပဲ ….
ဘယ်လို ပြောရမလဲ …
မနေ့ကတွေ့တော့စိတ်တောင်မကောင်းဘူး။ တကယ်ပါပဲ။ သူတို့ကလဲဆိုတာတော့လေ။ သူတို့မပျော်နိုင်တိုင်း သူများတွေကို သက်သက်မက်လိုက်လုပ်နေတယ်။ စိတ်ပျက်စရာပါပဲ။ အသေအပျောက်နဲလို့တော်သေး တယ်ပြောရမယ်။ နှစ်လုံးတောင်ဆိုတော့ အများကြီးမသေသွားတာပဲတော်သေးတယ်။
အဲ့သည်သတင်းနှင့်ပတ်သက်လို့ ကိုဘါးမားရဲ့ မိန့်ခွန်းလေး ကြိုက်သဗျ
( သမ္မတအိုဘားမားက အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူတို့က မည်သည့်အတွက်ကြောင့်
လုပ်သည်ကို မသိရှိရသေးကြောင်း၊ အချက်အလက်များ မရရှိသေးဘဲ လွယ်လင့်တကူ
ကောက်ချက်မချကြရန်နှင့် မိမိတို့အနေဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
ရုပ်မြင်သံကြားမှတစ်ဆင့် ပြည်သူများသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ )
အောက်က ဗွီအိုအေ လင့်ထဲမှာလည်း ဒီလိုပြောထားသေးတယ်
( “ဒီတို်က်ခိုက်မှုကို ဘယ်သူက လုပ်တယ်။ ဘာကြောင့်လုပ်တယ်။ စီစဉ်ချမှတ်ပြီး အကောင်အထည် ဖော်တာဟာ
အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းတခုလား။ ပြည်ပက လား။ ပြည်တွင်းကလား ဒါမှမဟုတ် မကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့ လူတဦးရဲ့
လုပ်ရပ်လား စသဖြင့် ကျနော်တို့ မသိရသေးပါဘူး။ စပြီးတော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
သဲလွန်စတိုင်းကို လိုက်ပြီးတော့ ခြေရာခံပြီးတော့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာမို့
အချိန်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ အဖြေထွက်အောင် ရှာနိုင်မှာပါ။
အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကို ထိခိုက် အန္တရာယ် ကျရောက်စေခဲ့တဲ့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်
တွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ တရားဥပဒေအရ အရေးယူမှာဖြစ်ပါတယ်။”)
ဘယ်သူ့လက်ချက်လည်းဆိုတာ သိနေတာဘဲ ( အကြားအမြင်ရနေဒယ်လေ )
ငါလိုးမသားတွေ လမ်းဘေးတွေတဲ့ ကောင်ဝိုင်းရိုက်ပလိုက်ဘဲ
ဗွီအိုအေက ယူအက်စ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံ လို့သုံးနှုံးတဲ့အတွက်
VOA – Voice of America တဲ့..။
လူသားစိတ်ဓာတ်ဆိုတာကို အများကြီး စဉ်းစားမိတယ်။
လူနဲ့ တိရိစာ္ဆန် ကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုရာမှာ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်က အဓိကပဲလို့ဆိုကြတယ်။
လူဖြစ်ပါလျှက် လူသားချင်းမစာနာ လူအများကြီးသေကြေပျက်စီးအောင် ဗုံးဖောက်ခွဲတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိသူကို လူသားစာရင်းထဲ ထည့်လို့ရပါ့မလား။
ကမာ္ဘပေါ်မှာ တကယ့်နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ကြီးတွေတောင် …..
ကိုယ့်အသက်ဘေးအတွက်ဆိုရင် ကြွက်တွင်းထဲလဲ နေတာပဲ။ ရေဆိုးမြောင်းထဲလည်း ဝင်ရဲတယ်။
သတ္တိဆိုတာ ဘာကို ခေါ်တာလဲ။
ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်ကနေ ခြေထိုးတာ….
လူမသိသူမသိ နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးတာ …
အဲဒါ သူရဲကောင်း မဟုတ်ဘူး။
သတ္တိနည်းသူ၊ ယုတ်မာသူသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောသလို အကြမ်းဖက်တဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဘယ်လူမျိုး ဘယ်ဘာသာ ဘယ်နိုင်ငံသားကလုပ်လုပ် ရှုတ်ချပါတယ်။